Koobka African Champions: finalka soo laabashada waxaa lagu soo celin doonaa meel dhexdhexaad ah - TELES RELAY
ACCUEIL » aan caadi ahayn • International • SPORTS Africa Champions League: Lugta soo laabashada waxaa lagu celin doonaa dhulka dhexdhexaad ah
Koobka African Champions: finalka soo noqonaya ayaa dib loogu celin doonaa dhulka dhexdhexaad ah
Eliseo Emma Kamgang 6 June 2019
Rajada Tunisia ayaa la caleemo saaray dhamaadka finalka taasoo u muuqatay mid fiyasiyo ah.
Tunis iyo Wydad Casablanca ayaa ugu dambeyntii ku soo laaban doona finalka African Champions League, waxaana ugu dambeyntii dib loo soo celin doonaa ka dib markii ay soo baxday CAN-2019. Kooxda reer Morocco ayaa diiday in ay soo gabagabeyso ciyaarta ka dib markii ay ku adkaysatay go'aanka garqaadaha.
Waxay ku dhowdahay laba maalmood oo shirar ah oo loogu talagalay Xiriirka Kubadda Cagta Afrika (CAF) si ay u go'aansadaan Arbacada, June 5, on ka dib markii uu ku soo laabtay tartankii kama dambeysta ee Champions League. Cayaartan, oo ku dhufatay Tunisia's Espérance iyo Wydad Casablanca jimcihii hore, ayaa ugu dambeyntii lagu soo afjari doonaa ciyaarta ka dib. CAN-2019, ayaa ku dhawaaqay guddiga maamulka ee kubada cagta Afrika.
Go'aanka ka dhasha mid ka mid ah xiisadaha ka taagan Tunisia, tan iyo markii Tunisku rajo ka lahaa jimcihii la soo dhaafay, ka dib markii kulan uu dhexmaray daqiiqadii 58e ee ciyaarta, halka Tunisiyiin ay hoggaaminayeen 1 ilaa 0 (1-1 inay tagaan). Kooxda ayaa durbadiiba ku dhawaaqday inaysan dooneynin inay joogaan.
Go'aanka dib u soo celinta celinta kama dambeyska ah ee dhulka dhexdhexaad ah lama aqbalayo. ah #TAS waa la qaban doonaa.
18: 45 - 5 Juun 2019
Ciyaarta kama dambeysta ah oo aan la dhameystiri karin sababtoo ah ciyaartoyda Wydad ayaa diiday inay dib u bilaabaan ciyaarta sababtoo ah waxay gool dhaliyeen ugu dambeyntii garsoore Gambia kulankaas, Mr. Gassama . Ciyaartoyda reer Morocco ayaa ku dooday ninkaas inuu yahay madow in uu qadariyo caawinaadda video (VAR), si aan micne lahayn.
Ciqaabta labadaba ee ES Tunis
Ka dib saacad iyo badh ka mid ah carqaladeeyay, dhamaadkii cayaarta ayaa ugu dambeyntii la caajisey iyadoo aan ciyaaraha dib loo bilaabin, islamarkaana ES Tunis ay heshay koobkii guusha. , Dhabarka guud.
Go'aankaan ku saabsan dib u soo celinta kama dambaysta ah, oo ah mid aad u badan oo ku salaysan dhexdhexaad ah, sidaas darteed waxaa loo arkaa ciqaab labanlaab ah taageerayaasha Tunista Rajada. Qaar ka mid ah, kuwaas oo ku soo biiray Paris hortiisa horteeda meesha guddiga fulinta ee CAF la qabtay, "muujiyay xanaaqooda", ayaa wariyay Ergeyga Gaarka ah BenoÃ®t Perrochais, oo sidoo kale tilmaamay in bilaysku "fuliyo gaaska jeexjeexa" si ay u qaboojiyaan niyadda.
Marka laga reebo halka kale ee soo kabsashadeen, soo laabashada ugu dambeysa ee tartankaan ee African Champions League horey waxaa loo ciyaari doonaa 19 July, tan iyo finalka Africa Cup of Nations waxay dhici doontaa taariikhdan.
La @CAF_Online ayaa go'aansaday inuu dib usoo celiyo guuldaradii ugu danbeysay ee Champions League #ESTWAC on dhulka dhexdhexaad ah. Go'aanka la waydiin karo, taas oo abuuraysa halis hor leh, wuxuu magdhowaa dabeecadaha aan macaawinada ahayn, wuxuuna ku xisaabtamayaa fikradda hore ee faafinta madaxtinimo.
source: https: //www.france24.com/fr/20190605-football-ligue-champions-africaine-es-tunis-wydad-casablanca-finale-rejouee-caf
Nolosha adduunka: Istaraatijiyada muruqa ee Washington ma joojinayso Shiinaha
PSG Foot PSG: Howlaha Keylor Navas waxa ay ku dheeleen Al-Khelaifi! â € œXAASHADA XADIISKA
Finalka Wimbledon: Prince William iyo Kate oo ka tirsan dadweynaha Federer v Djokovic - VIDEO
TIPS: 27 Talooyin xiiso leh oo loogu talagalay asxaabtaada
AROUNA M. TOURE DIB U HESHIISKA SPORTS GARGAARKA TV RENOUVEAU
Dadka: Beyoncé waxay gashatay roogga gaduudka gabadheeda quruxda badan ee dharka lagu qurxiyo iyo dhar isku mid ah
Cameroon: Armand Okol ayaa ku dhawaaqay musharaxnimadiisa doorashada 2020
Cameroon - Job Offers202
aan caadi ahayn22
DADKA & LIFESTYLE4,135
Daawooyinka dabiiciga ah20
DIB U EEGID AFRICAN PRESS147
Video dheeraad ah1,483